Dooddii kalsoonida baarlamanka Löfven oo lagu guul dareeysatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stefan Löfven (S) iyo Jimmie Åkesson (KD). sawir: Maja Suslin/TT
Dooddii kalsoonida baarlamanka Löfven oo lagu guul dareeysatay
SD oo ku hungoobay codeeyntii baarlamanka
La daabacay fredag 15 september 2017 kl 10.10
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa baarlamanka hor keenay mooshin kalsooni loogu qaadeyo madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven (S), middaasina oo lagu macneeyey inay ka dambeeyso fadeexaddii IT-ga ee hayadda hoggaanka gaadiidka.
Maanta oo ay codeeyntu dhacday ayay ku soo gabagaboowday sidii horeyba loo ogsoonaa iyo inuu Löfven ku guuleeysto inuu kursiga ku nagaado.
-43 ayaa ku codeeysay Haa, 136 waxey ku codeeysey Maya, halka ey 155 codadkooda hoos u dhigtay. Waxaan marka qeexi karaa in baarlamanku diidmo kala hor yimid kalsooni-kala laabashadii madaxa dawladda.
Stefan Löfven ayaa deggenaan ku qaabilay mooshinka.
–Ma ahan wax lala fajaco inuu xisbi xag-jir ahi doono inuu xukunka ka rido hoggaamiye xisbi Socialdemokrat ah, sida uu sheegay Stefan Löfven.
Xisbiyada garabka midig ee Alliansen ayaa isku raacsan in aan la taageerin kalsooni kala noqoshada Stefan Löfven. Halka uu xisbiga Moderaterna uu doonayo gadaal inuu ka kiciyo kalsooni kala noqosho madaxa dawladda.
–Waxaannu u aragnaa inay taagan tahay sabab su'aashan loo sii wado annaga oo jawaab ka sugeeyna madaxa dawladda, sida ay sheegtay hoggaamiyaha xubnaha xisbiga M ee baarlamanka Jessica Polfjärd.